China High Quality Battery Holder 9v ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
Battery Holder 9v ကိုင်ဆောင်သူသည်သင်၏ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန် pin နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဝါယာကြိုးနှင့်အဆက်အစပ်ပါသောဤ6AAA ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည် 9V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
Battery Holder 9v ၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
ဤ Battery Holder 9v သည် AAA သာမန်ဓာတ်ခဲခြောက်လုံးသို့မဟုတ်အားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီခြောက်လုံးကိုထိန်းနိုင်သည်။ Keyu အမှတ်တံဆိပ် Battery Holder ကိုဝါယာကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပါ ၀ င်သောအရည်သွေးမြင့်ပစ္စည်းများနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများနှင့်တင်းကျပ်စွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ သင် ၁၀၀% ကောင်းသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်။
ဘက်ထရီ Holder 9v ၏ထုတ်ကုန် ၂. သတ်မှတ်ချက် (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
ထုတ်ကုန်အမည် ဝါယာကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပါ ၀ င်သော AAA ဓာတ်ခဲဘက်ထရီ ၆ လုံး
အရွယ်အစား: ၅၃*၃၇.၅*၂၄.၈ မီလီမီတာ
3. ဘက်ထရီ Holder 9v ၏ထုတ်ကုန် Feature နှင့်လျှောက်လွှာ
၁။ ဤဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည် ၉v ကိုင်ဆောင်သူအား ၉v ဘက်ထရီအထွက်သို့ဖြစ်စေနိုင်သည်
၄။ AAA ဓာတ်ခဲခြောက်လုံးကိုကိုင်ထားပါ။
၇။ ရေဒီယို၊ ကစားစရာများ၊ နှိုးစက်နာရီသယ်ဆောင်နိုင်သောဓာတ်မီးတို့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပြင်ပပါဝါအရင်းအမြစ်
Battery Holder 9v ၏ 4. Product Details
ဝါယာကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအသေးစိတ်ပါ ၀ င်သောဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ ၉ ။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ဝါယာကြိုးနှင့်အဆက်အစပ်ပါ ၀ င်သော AAA ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသူ ၆ ဦး
အရွယ်အစား: ၅၃*၃၇.၅*၂၄.၈ မီလီမီတာ၊ ဝါယာကြိုးအရှည် = ၁၅၀ မီလီမီတာ
အဆုံးသတ်ခြင်းပုံစံ: connector ကို
Battery Holder 9v ၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး ၅
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Battery Holder 9v အားလုံး
၆။ Battery Holder 9v ၏ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်း
7. Battery Holder 9v ၏အမေးအဖြေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Battery Holder 9v ကိုင်ဆောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်အနှစ် ၂၀၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်း ၁၀၀ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့မှုနှင့်ဖောက်သည်များစွာသည် ၁၀ နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရုံသာမကဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြဿနာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်နမူနာပုံစံများ၊ သင်အားသွင်းခကိုပေးဆောင်ရုံဖြင့် Battery Holder 9v ကိုင်ဆောင်သူအတွက်အခမဲ့နမူနာများရနိုင်သည်။
hot Tags:: ဘက်ထရီ Holder 9v၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက် ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်